ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဆံပင်ဖြူ ကြတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ? – Blue Sea
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဆံပင်ဖြူ ကြတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ?
လူတွေမှာ ဆံပင် ဖြူတယ်ဆိုတာ သဘာဝပါပဲ ။ အသက်ကြီးလာရင် ဆံပင် ဖြူမယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အသက်က ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ဆံပင်ဖြူတွေရှိနေရင် ဘယ် လိုလုပ်မလဲ။ ဒီလိုငယ်ရွယ်တုန်းအချိန်မှာ ဆံပင်ဖြူတွေရှိလာတာကို အရွယ်မတိုင်မီ ဆံပင်ဖြူခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ သဘာဝအတိုင်းမဟုတ် တော့ တာ ကြောင့် ဆေးပညာအရ သိထားသင့်တဲ့အချက်တွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဆံပင်ဖြူရခြင်း အ ကြောင်းရင်းတွေက အများကြီးရှိပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အစားအစာ၊ ဆံသားထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းမမှန်တာစတဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံ တချိုကြောင့်လည်း ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဆံပင်ဖြူစေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် အ ကြောင်းရင်းတွေ က တော့ ဗီတာမင် B12 ချို့တဲ့မှု၊ဟော်မုန်းမညီမျှမှုနဲ့ အရွယ် မတိုင်မီ သွေးဆုံးခြင်း တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ အသက်ကြီးလာတာနဲ့ အမျှ ( ဆံပင်ကိုအနက်ရောင်ဖြစ်စေတဲ့ ) melanin pigment ပုံ မှန် ပမာဏ လောက်ကို ပေါင်းစပ်ဓာတ်ပြုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်က ကျဆင်းလာပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်ပဲ ဖြူလွ လွ ဆံနွယ်တွေ ဖြစ်လာရတာပေါ့။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အစားအစာ၊ ဆံသားထိန်းသိမ်းမှု နည်းလမ်း မမှန်တာစတဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံတချိုကြောင့်လည်း ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဆံပင်ဖြူစေနိုင်ပါ တယ် ။
ဒီတော့ ဒီလို ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ဖြူလာရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသိထားမှ သင့်တော်တဲ့ ကုသထိန်းသိမ်းမှုကိုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်လို့ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ဆံပင်ဖြူ နေ ပြီ ဆိုရင် ကိုယ့်မှာရှိနေနိင်လောက်တဲ့ အောက်ပါအချက်တွေကို သတိထားပါ။
ဆံပင်ဖြူရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲကတစ်ခုက သိုင်းရွိုက်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများလွန်းတာ ဒါမှမဟုတ် နည်းလွန်းတာတွေက ဆံသားအတွင်း melanin ထွက်ရှိမှုကို ထိခိုက်စေပြီး အရွယ်မတိုင်မီ ဆံပင်ဖြူခြင်းကို ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
ဗီတာမင် B12 ချို့တဲ့ခြင်း
B12 ဓာတ်ချို့တဲ့ရင် ငယ်ရွယ်စဉ်မှာဆံပင်ဖြူနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် B12 ၊ ဇင့်နဲ့ကော့ပါးတို့က ဆံသားအားဖြည့်ပေးတဲ့ဓာတ်တွေဖြစ်တာကြောင့် B12 ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေကို နေ့စဉ်အာဟာရမှာ အမြဲထည့်စားပါ။
မိဘ တွေမှာ ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဆံပင်ဖြူရှိခဲ့ဖူးရင် မွေးလာတဲ့သားသမီးမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ဖို့ ပိုများပါတယ်။
ဗီတာမင် C နဲ့ E
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဗီတာမင် C နဲ့ E ချို့တဲ့နေရင်လည်း ဆံပင်ဖြူလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုချို့တဲ့ရင် melanin ထုတ်ပေးတဲ့ ဆဲလ်တွေရဲ့ပမာဏကို လျော့နည်းစေပြီး ဆံပင်ဖြူလာစေပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ အသက်ငယ်ငယ် နဲ့ ဆံပင်ဖြူစေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့အခါ သောက်သုံးသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ free radicals ဓာတ်တွေထွက်ရှိစေပြီး melanin ကိုလျော့နည်းစေပါတယ်။
အသင့်အလွယ်စားအစားအစာတွေက အသက်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ဆံပင်ဖြူစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အသင့်စား သို့မဟုတ် ပြုပြင်စီမံထားတဲ့အစားအစာတွေဟာ ဆံသားအတွင်းက melanin ဓာတ်ကို လျော့နည်းစေပြီး အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို မြန်ဆန် စေပါတယ်။ ဒီအစားအစာတွေကို ကြာရှည်စွဲမြဲစားသုံးသူတွေဟာ အရွယ်မတိုင်မီ ဆံပင်ဖြူလာဖို့များပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုက လူကိုထိခိုက်မှုများစွာဖြစ်လာစေနိုင်ပြီး စိတ်တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ စိတ်ပူပန်ခြင်းတို့က melanin ဆဲလ်တွေကို ပမာဏ လျော့စေပြီး ငယ်ငယ်နဲ့ ဆံပင်ဖြူလာစေပါတယ်။
ဘာလို့ ဆံပင်ဖြူတွေတွေ့နေရလဲ။ အာဟာရမညီမျှတဲ့ စားသောက်ပုံ အ လေ့အထရှိရင် ချို့တဲ့နေတဲ့အာဟာရတွေလည်း အများကြီး ရှိမှာ ပါပဲ ။ ကိုယ့်ခန္ဓာ ကိုယ် က ဗီတာမင်နဲ့ သတ္ထုဓာတ်အလုံအလောက်မရနိုင်တဲ့အခါ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ချို့ယွင်းလာတတ်တာကြောင့် ဆံပင်ဖြူတာအပါအဝင် တခြားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေပါဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဆံပင် အ ခြောက်ခံစက်နဲ့ ဖြောင့်စက်တွေ အသုံးများခြင်း
ဒီလိုအသုံးများခြင်းက ဆံသားကို အားနည်းစေပါတယ်။ ဒီစက်တွေကနေထွက်ရှိလာတဲ့ အပူရှိန်က melanin ထွက်ရှိမှုကို ထိခိုက်စေပြီး ဆံပင်ဖြူလာစေနိုင်ပါတယ်။
တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ဦးရေပြားမသန့်ရှင်းမှုကလည်း အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်ကို ဂရုမစိုက်ရင်တော့ ဆံပင်ကဖြူလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မကြာခဏဆံပင်ဆိုးရင် ဆံသားပျက်စီးစေနိင်ပါတယ်။ ဒီဆိုးဆေးတွေမှာ ဓာတုပစ္စည်းတွေပါဝင်တာကြောင့် melanin ဆဲလ်တွေကိုလည်းပျက်စိးစေနိုင်ပါ တယ်.
အရွယ်မတိုင်မီသွေးဆုံးခြင်းလက္ခဏာခံစားနေရသူတွေဟာ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ဆံပင်ဖြူလာစေနိုင်ပါတယ်။
ဖောလစ်အက်စစ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတော်များများအတွက် မရှိမဖြစ်ဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သူချို့တဲ့ပြီဆိုရင် ဆံပင်သန်စွမ်းမှုကိုနှေးကွေးစေနိုင်ရုံမက ဆံပင်ပါဖြူစေပါတယ်။
ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ဆံပင်ဖြူလာမှာကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ?
(၄) သိုင်းရွိုက်အခြေအနေကို ဆန်းစစ်ပါ
(၆) ဆံပင်ကို ဆီလိမ်းပါ။
(၇) ရေမွှေးပါတဲ့ ခေါင်းလိမ်းဆီတွေကိုရှောင်ပါ။
ဗာဒံစေ့အပါအဝင် အ aစ့ အဆံတွေကို စားသုံးပေးရင် ဆံပင်ဖြူခြင်းကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ချောကလက်၊ ငှက်ပျောသီး၊ ဗာဒံစေ့တို့ကို ဖျော်သောက်ပေး ရင် ဆံပင်နဲ့ အ ရေပြားကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းပါတယ်။
Credit : Yun Sandi Nan Mon
“ဒန့်သလွန်နှင့် ကျန်းမာရေး” အကြောင်း